Ronaldo oo mar kale ku guulaystay laacibka Adduunka - Cakaara News
Sp(CS) Talaado Jan-13-2015. Weeraryahanka kooxda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ayaa ku guulaystay ciyaaryahanka ugu laacibsan kubadda cagta adduunka, iyadoo markii labaad ee isku xigta la gudoonsiiyay billada Ballon d'Or-ka. Kabtanka xulka Portugal ayaa waxa uu ka guulaystay weeraryahanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo goolhayaha kooxda Bayern Munich Manuel Neuer.
Ciyaaryahanka xulka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi – ee horay ugu guulaystay 4 jeer oo isku xigta billadan – ayaa galay kaalinta labaad kaddib markii uu aruursaday boqokiiba 15.76%. Waxa uu waxyar un ka horreeyay goolhayaha xulka Jarmalka iyo kooxda Bayern Munich, Manuel Neuer oo helay boqolkiiba 15.72%.
Cristiano Ronaldo oo eegaya billadda Ballon d’Or-ka ee 2014-ka ee uu ku guulaystay Ronaldo, oo dhaliyay 52 gool 43 kulan oo uu dheelay 2014-kii, ayaa u muuqday mid xamaasadaysan markii uu billada ka gudoomayay ciyaaryahankii hore ee Faransiiska, Barcelona iyo Arsenal, Thierry Henry.
Ronaldo ayaa yidhi: “Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dadka ii codeeyay, madaxweynaha kooxdayda, tababarahayga iyo Real Madrid. Waxa ay aheyd sanad aanan hilmaami karin. Inaan ku guulaysto billadan waa wax aad gaar u ah.”
Tababaraha xulka Jarmal Joachim Low ee ku guulaystay koobka adduunka ee 2014-kii Tababaraha xulka Jarmal Joachim Low ee ku guulaystay koobka adduunka ee 2014-kii ayaa noqday tababarihii ugu wanaagsanaa sanadkii 2014-ka. Dhammaan ciyaaryahanada u tartamay billadda Ballon d'Or-ka ayaa waxa ay soo galeen kooxdii ugu wanaagsaneyd sanadka, iyagoo liiskana ay ku weylinayeen ciyaaryahanada difaaca ka dheela ee Philipp Lahm, David Luiz,
Thiago Silva iyo Sergio Ramos, khadka dhexana waxaa la soo xushay Andres Iniesta, Toni Kroos iyo Angel Di Maria iyo weeraryahan Arjen Robben.